Waa Kuma Ninkan ay ka Muuqadaan Astaamihii CWXO? iyo Arimo Xasasi ah oo ka Taagan Bariga Afrika. – Rasaasa News
“Ubo wayso waan kugu arkaa agab sallaadeedde, Aadaana waan kaa maqlaa oogta waabariye Ashahaada beenlow maxaa ahaa kugu aasan”. Waa Gacan ku dhiigle Cabdiraxmaan Daa,uus ninkii dilay Dr. Maxamed Sirad Dolal.
Nin oday ah ayaa xili xiliyada ka mid ah aad u haraamay ururka Onlf, wuxuu ninkaas odayga ah ku cataabayey dadkii bay dhameeyeen oo ay xabad iskaga dhufanayaan sabab la,aan. Kolkaas ayaan isku dayey in aan difaaco ururka Jwxo oo aan runtii aad u jeclahay, in kasta oo difaacii aan difaaci jiray aan hada qiil u la,ahay waayo Jwxo-shiil, waxyaalaha uu sameeyey isaga oo ururka sheeganaya ayaan difaac u waayey. Waxaanse ku kalsoonahay in halganka iyo ummada Ogadeeniyaba ay ka soo kaban doonaan dhibaatooyinka uu gaystay Jwxo-shiil.
Odayga, waxaan u sharxay mabaadiida ururka, kolkaas ayuu igu yidhi Adeer kuwa aad sharxayso xagay joogaan way fiican yihiine.
Kadib baadhid dheer oo aan sameeyey ayaa waxaa ii soo baxday in waxa uu odaygu xiligaas sheegayey ay run ahaayeen. Wixii ka dambeeyey 2000, ururka Jwxo dad badan oo nooc walba leh ayaa waxay u soo galeen in ay dakaneyaal ay tirsanayaan ay kaga aargoostaan bulshada qaarkeed.
Dadka arimaha lagu cadeeyey waxaa ugu horeeya Jwxo-shiil, oo kuli jilibkiisa hubeeyey isaga oo u sheegay in ay gutaan aanooyin ay tirsanayeen. Jwxo-shiil colaada waxaa uu ugu horeynba kula dhacay reer Cali, waxyeelada uu Jwxo ahaan ku gaadhsiiyeyna Haaruun ahaan kuma gaadhsiiyeen.
Runtii dhibaatada uu dhalinyarada baray cid walba way saamaysay, balse dadka uu ficilka cad ee la wada arkayey ku saamaysay waxaa kow ah Dr. Maxamed Sirad Dolal. Dr.Dolal waxaa dilay ninka aad sawirka ku aragtaan oo ay Jwxo-shiil xigto yihiin una dilay kaliya sabab Jwxo-shiil, ninkan dadweynaha qurbo joogta ahi waxay u haysteen in uu yahay N/hurire qoriga u qaatay in uu dadkiisa iyo dalkiisa daryeelo. Waxaase cad in ujeedada kaliya ee uu ururka Onlf u galay in ay ahayd in uu dilo dad kuwa ugu xigga.
Cabdiraxmaan Daa,uus oo ay hada wajigiisa noogu horeyso magaciisa mooyee iyo kuwa isaga la midka ah ee ku sharaxan boggaga internetka ee Jwxo-shiil, ayaa iyagu ah hal reer, oo si gaar ah u ugaadhsada beelaha kale iyo shakhsiyaadka dalka iyo dadka wax tarka u ah.
“Rag gogoshii waa godob la,aan” Cabdiraxmaan Da,uus waxaa uu ka dhuun dhuuntaa baa la yidhi xigtadii Dr. Dolal, “godobi waa dayn” Daa,uusba Jwxo waxaa uu u galay in uu Dr. Dolal iyo kuwo la mid ah dilo, kolkii uu dilayna waxaa uu nabad ka doontay dalka Kenya.
Waxaa Kenya ka jirta xiisad ficilo oo Cabdiraxmaan Daa,uus sababtiisa ku timid. Daa,uus waxaa ku mehersan baa la yidhi gabadh uu Dr.Dolal adeer ugu quman yahay, waxaa loo sheegay gabadhii in ayna oori u noqon ninka adeerkeed dilay, wayna yeeshay arintaas.
Hadaba, sida ay warar hoose sheegayaan Cabdiraxmaan Da,uus ayaa si ficilo ah loogu aqal galiyey Islaan dibadaha ka timid oo ku mehersan nin reer Qoraxeey ah, balse ay ninkeeda isu cadhaysan yihiin. Xasarad ayaa ka aloosan Kenya.